အိမ်ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူ၊ စက်ရုံ - reducers, worm reducers, worm gearboxes, planetary gearboxes, speed speed, variators, helical gear, sprial bevel ဂီယာ၊ စိုက်ပျိုးရေးဂီယာအုံများ၊ လယ်ထွန်စက်၊
HZPT စက်ရုံများသည် ISO 9001 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုကျော်လွန်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများသည် TS 16949 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်။
+ အနိမ့်တန်ပြန်ညာဘက်ထောင့် servo တီကောင် gheadheads
+ UDL မြန်နှုန်းမူကွဲ
+ Cycloidal ဂီယာလျှော့
+ စိုက်ပျိုးရေးစက်ပစ္စည်းများအတွက် Gearbox
+ Helical ရည်ရွယ်မော်တာ
+ လိမ် bevel ရည်ရွယ်မော်တာ
+ tracors & အော်တိုဘို့ဂီယာအုံ
+ အထူးလျှော့ & ဂီယာအိတ်များ
+ Worm & Bevel Gear အော်ပရေတာ
+ DC ကသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားရည်ရွယ်မော်တာ
+ TMR ရောနှောများအတွက်ဂီယာစနစ်
+ SMR ရိုးတံလျှော့ချ
+ Planet သယ်ဆောင်သူများ
+ helical လက်စွပ်ဂီယာ
+ Differential ဂီယာ
+ spline ရိုးတံ & ဂီယာရိုးတံ
+ ဂီယာ & helical ဂီယာစွယ်
+ တီကောင်ဂီယာ & worm
+ Bevel ဂီယာ & sprial bevel ဂီယာ
+ torque လက်မောင်း
+ PTO ရိုးတံ
+ Forklift ဂီယာ
+ ရေနံ pumps များအတွက်ဂီယာ
+ helical ဂီယာ
+ ဟိုက်ဒရောလစ် drive ကိုစနစ်
+ Y2 စီးရီးမော်တာများ
+ Y စီးရီးမော်တာ
+ YD စီးရီး Multi- မြန်နှုန်းမော်တာ
+ YS စီးရီးမော်တာများ
+ YC YL စီးရီးမော်တာများ
+ YEJ မော်တာများ
+ TYGZ ထပ်တူပြုခြင်းမော်တာ
+ TYBZ ထပ်တူပြုခြင်းမော်တာ
+ Servo မော်တာ
+ Brushles DC မော်တာ
+ Electirc မော်တာ
+ ရှားပါးဒြပ်စင် - အမြဲတမ်း - သံလိုက်မော်တာများ (REPM MOTORS)
HZPT ဂီယာနှင့်ဂီယာအုံအမျိုးမျိုးနှင့်အမြန်နှုန်းလျှော့ချရန်အထူးကျွမ်းကျင်သည်။ တီကောင်ဂီယာလျှော့ချ, အနိမ့်တန်ပြန်လျှော့ချခြင်း, အနိမ့်တန်ပြန်ညာဘက်ထောင့်ဂီယာအုံ, စိုက်ပျိုးရေးဂီယာအုံများ, လယ်ထွန်စက်ဂီယာအုံ, အလိုအလျောက်ဂီယာအုံ, ဂြိုလ်ဂီယာအုံ, ...
ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်နည်းပညာတစ်ခုလုံးကိုပေါင်းစပ်ထားသည့် Hangzhou Ever-power Machinery Co. , Ltd သည်အမြန်နှုန်းလျှော့ချစက်၊ ဂီယာသေတ္တာ၊ ပူနွေးသောဂီယာလျှော့စက်များနှင့်ဂီယာအုံများထုတ်လုပ်ရန်အထူးပြုသည်။ ဒါဟာအထူး, အကျိုးရှိစွာနှင့်လူသားဂီယာဖြေရှင်းချက်ပေးမြှုပ်နှံနေသည်။
Unipolar တာဘိုင်လျှော့ချ WKS
WJ စီးရီး worm-gear speed reducer သည်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ အသွင်အပြင်သည်လှပပြီးသေးငယ်သည်၊ ထုတ်ရန်အချိန်အလွန်လေးသည်၊ လျှပ်စစ်စက်ယန္တရားများသို့မဟုတ် UD စီးရီးဂြိုဟ်၏စူးရှသောလွဲချော်နေသောရွေ့လျားစက်ဖြင့်တိုက်ရိုက်ပေါင်းစည်းနိုင်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံသည်ကျစ်လစ်သည်။ အပေါက်အတွက် worm ဂီယာထုတ်လုပ်မှု၊ အသုံးပြုသူရောနှောပါက ၀ င်ရိုးကိုသာယိမ်းယိုင်ပြီး၊ ၀ င်ရိုးကိုတွဲဖက်ပြီး ၀ င်ရိုးအားကြိုးပမ်းနိုင်သည်။ ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။
Udl အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲမှု nmrv တီကောင်ဂီယာအမျိုးအနွယ်ကိုလျှော့ချသံမဏိဂီယာလျှော့ချသံမဏိဂီယာမော်တာအထူးသဖြင့်လျှော့ချသံမဏိဂီယာမော်တာဂီယာအုံသွန်းလောင်းသောသံသရာဂီယာအမျိုးအနွယ်ကိုလျှော့ချ။
Servo worm ဂီယာယူနစ်များသည်အမျိုးအစား ၃ မျိုးရှိသည်။ ၄၅ - ၅၀ - ၅၅ - ၆၃ - ၇၅ - ၉၀၊ dual lead lead worm drive နှင့်အတူ။ worm ရိုးတံ၏လက်ဝဲနှင့်ညာဘက်ခြမ်းသည်ကွဲပြားသောခဲထောင့်ကို အသုံးပြု၍ သွားအထူတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားစေသည်။ ရိုးနှင့်တန်ပြန်ညှိ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူများ၏ဘ ၀ နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော၊
ဤထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ကုမ္ပဏီများသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအပြင်းထန်ဆုံးလျှပ်စစ်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့်စက်မှုစွမ်းအားစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအားထားနေရသည်။ အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ဖြစ်သည်။
Professional က R & D အင်ဂျင်နီယာ
ကုမ္ပဏီသည်အရည်အသွေး၏စီမံခန့်ခွဲမှုရည်မှန်းချက်ကို ဦး စားပေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
24 ×7service support သည်ကုမ္ပဏီ၏အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာ၌မဆိုအရည်အသွေးရှိသောဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသော 24 ×7ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးမှု။
ပြုပြင် / အစားထိုးပါ
စက်မှုစွမ်းအင်ထုတ်လွှင့်မှုလောကတွင်ရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းများစွာရှိပြီးအရာဝတ္ထုများကိုမြန်ဆန်စွာရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ ဤစနစ်များ၏အလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းမှာဂီယာအုံများဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ်ထားသောစက်များသည်စွမ်းအင်ကိုအဓိကမောင်းနှင်သူမှဝန်သို့လွှဲပြောင်းပေးသည်။ ဂီယာလျှော့ချစက်များသည်ဤဆောင်းပါး၏အဓိကအာရုံစိုက်မှုဖြစ်သည်။
ရိုးရှင်းသောစက်ခြောက်ခုအနက်ဂီယာအုံများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စက်မှုအားသာချက်ကိုရရှိခြင်းဖြင့်ပိုမိုထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန် Wheel နှင့် Axle နှင့် / သို့မဟုတ် Screw (worm reducer) ကိုအသုံးပြုကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်မိနစ်လည်ပတ်မှုနှုန်း (သို့) RPM ဖြင့်လည်ပတ်ရန်အတွက်မော်တာများကိုဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းအမြန်နှုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ အမျိုးမျိုးသောကြိမ်နှုန်း drives တွေကိုများစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်အရှိန်မြှင့်ရန်နှင့် torque ကိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောဂီယာအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ပို၍ အကျိုးရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ motor သည် 1800 RPM သို့လှည့်သွားပြီး၊ ထို motor သည် 10: 1 ဂီယာ reducer နှင့်ဆက်သွယ်ပါက reducer သည် 180RPM ကိုထွက်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ထိုမော်တာတွင် 30 lb.ft. ၏ full load torque rating ရှိပါက 10: 1 reducer (85% ၏ထိရောက်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုယူဆလျှင်) မှ 255 lb.ft. ဖြစ်လိမ့်မည်။ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အလုပ်ပမာဏသိသိသာသာတိုးမြှင့်ပေးခြင်း။ ဤကဲ့သို့သောအသုံးများသောအသုံးအဆောင်များသည်သယ်ဆောင်မည့်သူများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် throughput capacity သည်တိကျသောပြေးနှုန်းနှင့်လိုအပ်သောအရာများကိုနေရာတစ်ခုမှအခြားတစ်ခုသို့ရွှေ့ပြောင်းရန် torque ပိုမိုမြင့်မားရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအဓိကအားဖြင့်ဂျပန်၊ အမေရိကန်၊ ဂျာမနီ၊ အရှေ့တောင်အာရှနှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများသို့တင်ပို့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးစက်ယန္တရားတွင်အထူးပြု OEM OEM ဖောက်သည်များပါဝင်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည် Fortune 500 ကုမ္ပဏီများနှင့်လက်တွဲပြီးတရုတ်နိုင်ငံရှိသူတို့၏အဓိကသံမဏိပစ္စည်းပေးသွင်းသူများဖြစ်လာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိဖောက်သည်များသို့တင်ပို့ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏သာလွန်ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့် ၀ ယ်ယူပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှုကြောင့်နာမည်ကောင်းရရှိခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိသုံးစွဲသူများအားကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်၍ စီးပွားရေးညှိနှိုင်းရန်၊ သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလုပ်သမား ၁၅၀၀ ကျော်ရှိပြီး cnc လှည့်စက်နှင့် cnc အလုပ်စင်တာများရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် china-reducers.com ရှိအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊
ဂီယာလျှော့စက်များပါ ၀ င်သည့်စနစ်များရှိလာသောအခါများသောအားဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာသည့်မေးခွန်းနှစ်ခုရှိသည်။
“ အခုငါ့မှာရှိနေတာကမကောင်းဘူး။ ပိုကောင်းတဲ့စနစ်ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
မေးခွန်းနှစ်ခုလုံးသည်မှန်ကန်သောအသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောတစ်စုံတစ် ဦး အားသင့်စံပြစနစ်ကိုတည်ဆောက်ရန်သင့်အားကူညီပေးပါသည်။ မင်းကဖြန့်ဖြူးသူဆိုရင်မင်းရဲ့ဂီယာလျှော့ချရေးလိုအပ်ချက်တွေနဲ့မင်းကိုပြောချင်တယ်။ ဖြန့်ဖြူးသူတစ်ယောက်ကိုမင်းလိုချင်ရင်မင်းကိုမင်းနဲ့ဆက်သွယ်ချင်တယ်။
Gear reducers များသည်ရှုပ်ထွေးသော်လည်းမှန်ကန်သောအရာကိုရွေးချယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ HZPT သည်စိုက်ပျိုးရေး၊ စုစုပေါင်း၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ သတ္တုတွင်းနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမည့်အရည်အသွေး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊